Miless Zanawi oo sheegay in ay wada shaqeyn xoog u dhaxayso Dowladiisa iyo Dowlada Federaalka
Ra’siul Wasaaraha wadanka Itoobiya Miless Zanawi oo u waramayay wakaaladda wararka ee Itoobiya ee Ena aya waxa uu sheegay in wada shaqeyn xoog leh ay u dhexeyso Dowladda Itoobiya iyo Dowladda Federaalka.
Miless Zanawi waxa uu sheegay in ay si aad ah u daneynayaan in Soomaaliya ay hesho Dowlad si ay shacabku uga baxaan dhibaatada, waxaa kalloo uu sheegay in Dowladda Soomaaliya ay ahmiyad weyn ugu fadhido wadamada geeska Afrika.
Mar wax laga weydiiyay waxa ay isla soo qaadeen isaga iyo Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya Cali Max’ed Geedi waxa uu sheegay in ay ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa ama loo sii adkeyn lahaa xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya, waxa uuna beeniyay in Dowladda Itoobiya ay hub siisay Dowladda Federaalka. “Wadamada IGAD hadafkoodu waa sidiii Soomaaliya hub ka dhigis loogu sameyn lahaa, anagu taa ayaan taageerasan nahay” ayuu yiri Miless Zanawi.
Dhawaan Magaalada Jowhar waxaa heshiis ku kala sixiixday mas’uuliyiin ka socday Itoobiya iyo Dowladda Federaalka, wuxuuna heshiis-kaasi dhigayay in la iska kaashado arrimaha dhaqaalaha siyaasadda iyo nabadgelyada.
DHEGEYSO CODAD GOOGOOS AH:::: GUJI....